संविधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाईने
27 Shrawan 2074 Friday 5:27 pm प्रतिकृया दिनुहोस
काठमाडौं । सत्तारुढ दल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच संविधान संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा आज विहान भएको छलफलमा संशोधन विधेयक मतदानमा लैजाने सहमति भएको हो ।
सहमतिसँगै सरकार मंगलबार संसदमा संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्ने तयारीमा लागेको छ । बैठकमा प्रस्ताव पारित गर्न दुबै पक्षले पहल गर्ने निर्णय पनि भएको छ । संशोधन अघि बढाउने सहमति भएपनि विधेयकको पक्षमा दुई तिहाई बहुमत अझै देखिएको छैन ।
सत्तारुढ दलका नेताका अनुसार संशोधन विधेयक पास गर्न प्रयास गर्ने तर, फेल भएपनि परिणामलाई स्वीकार गर्दै राजपा चुनावमा जाने सहमति भएको हो । सर्बोच्च अदालतले तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने बाटो खुला गरेपछि राजपा स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पनि सकारात्मक बनेको छ ।
राजपाले उठाएको मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाईएका मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणालगायतका माग पूरा गर्न पनि सत्तारुढ दल सकारात्मक भएका छन् ।
काठमाडौं : डा. गोविन्द केसीको माग पुरा गर्न दबाब दिन आयोजना भएको प्रर्दशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ ...
किन हुन सकेन डा. केसी र सरकारबीच ३ दिन वित्दा पनि बार्ता
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गम्भिर हुनुपर्ने सभामुखको भनाई
सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी थाल्यो कांग्रेसले